Ny Paositra Ao Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2017 3:33 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Martsa 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manolotra ny sary fampitahana eo amin'ny asan'ny paositra tena tsy mahomby ao Rosia sy ny paositra any ivelany toy ny Sampan-draharahan'ny Paositra any Etazonia ny mpisera LJ valkorn (nasongadina teto ny karatra paositaly fahatsiarovany ny fitsidihana an'i Moskoa tamin'ny volana Novambra 2006):
Mampiseho mazava ny fomba fiasan'izy ireo ny sary famantarana ireo orinasa roa ireo :
[sary somary nasiana fanamboarana mba hifanaraka amin'ny endrika GV]
Tonga dia mazava avy hatrany ny antony mahatonga ny fonosana avy any Etazonia telo andro no tonga any Rosia, ary iray volana vao tonga any amin'ny andefasana ao Moskoa.
Ireto ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra:
alyonka: Subconscious pushes itself outside during the creation of a logo, and the creators are expressing not what they would like to express, but the truth 🙂 Symbols…
__mixa__: Once I got a package from London to Khabarovsk in four days. It's sad that that was an exception, not a rule, and that usually packages shake their way to us on trains for two to three months 🙁
valkorn : Efa reko ny petrakevitra mahatonga izany: natao ho fizarana faktiora sy ny taratasy fampielezan-kevitra fifidianana ny Sampan-draharahan'ny Paositra Rosiana ary tahaka ny atao ambanin-javatra ny sisa amin'ny fifamoivoizana .
darkcjc : Tsy nandre fotsiny aho fa nahita mivantana mihitsy ny fomba fiasa amin'ny fanisahana tanteraka ny fanafarana rehetra aloha mba hamitana ny (fampitana) ireo fitaovana fanontam-pirinty hanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana any amin'ny ankamaroan'ireo mpanonta printy rehetra … Angamba, natao ho an'izany ihany koa ny paositra . Eny, ary koa hamoahana taratasy filazana ho an'ireo miaramila vaovao [povestki].
pinwizz : Nanomboka tamin'ny fararano farany teo, naharay ny taratasy filazana ny miaramila zazavao ho an'ny taona manaraka tao amin'ny foibe fandraisana zazavao. Azo antoka kokoa izany sady haingana kokoa noho ny USPS . Manoro hevitra izany ho an'ny olon-drehetra aho.
ghost_deep : Mihevitra ve ianao fa tsara ny manandrana [mandefa taratasy] amin'ny alalan'ny miaramila? ^ _ ^
spinka : naharay ny fanontana feno ny ‘Sex and the City’ avy amin'ny Amazon.com Amerikana ny namako mpisera LJ iray rehefa niandry enimbolana. Nandritra io fotoana io, nandefasany solony aloha izy =)
alyonka : Tonga ny feon'ny fieritreretana mandritra ny famoronana sary famantarana, ary tsy maneho izay tiany hambara ireo mpamorona fa ny marina 🙂 Endrika Famantarana…
kitaycev : Raha tsy diso aho, tsy latsaky ny 2 na 3 andro ny fandraisana taratasy alefa ao Moskoa ihany.
2007-03-06 04:48 maraina (UTC)
__mixa__ : Indray mandeha aho nahazo fonosana tao Khabarovsk avy any Londra tao anatin'ny efatra andro. Nampalahelo fa zava-naningana iny fa tsy araka ny fenitra mahazatra, ary matetika mandeha fiarandalamby mandritra ny roa na telo volana ny fonosana vao tonga aty amintsika 🙁